Boqorka iyo boqorada Norway, iyo dhowr wasiir kale oo la karantiilay. - NorSom News
Boqorka iyo boqorada Norway, iyo dhowr wasiir kale oo la karantiilay.
Sida ilo xog ogaal ah ay u xaqiijiyeen Tv-ga qaranka Norway ee NRK, boqorka iyo boqorada Norway, iyo dhowr wasiir oo katirsan dowlada Norway ayaa la karantiilay, iyaga oo looga shakisanyahay inay qaadeen caabuqa Corona-Virus.
Boqorka iyo boqorada oo da´ ahaan ah waayeel wali is heysta ayaa isbuucii hore booqasho ku tagay dalka Urdun, waxaana safarkooda ku weheliyay dhowr wasiir oo hada la karantiilay.
Wasiiradda arrimaha dibadda Ine Marie Eriksen Søreide iyo wasiiradda ganacsiga Iselin Nybø ayaa kamid ahaa xubnihii wasiiradda ahaa ee qoyska boqortooyada ku weheliyay booqashada Urdun.
Xigasho/kilde: Kongeparet og statsråd i karantene.
Previous articleBergen: Iskuulada iyo “barnehegayaash” waa xiranyihiin, wixii ka bilowdo Jimcaha/isniinta.
Next articleWaa kuma Tim Mynett, odeyga cusub ee Xildhibaan Ilhaam Cumar.